बुलबुलमाथि समीक्षक टिप्पणी - चलचित्र - साप्ताहिक
बुलबुलमाथि समीक्षक टिप्पणी
फाल्गुन ११, २०७५
गत शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको चलचित्र बुलबुल हेरेका अधिकांश दर्शक तथा समिक्षकले यसको विषयवस्तु, प्रस्तुति तथा कलाकारहरूको अभिनयको प्रशंसा गरेका छन् । काठमाडौंका मल्टिप्लेक्सहरूमा बुधवारसम्म चलचित्रले राम्रै शो पनि पाएको छ । यद्यपि चलचित्र जति नै स्तरिय भए पनि सिनेमा हलका सिटहरू खाली–खाली भए भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । समीक्षकले अति नै प्रशंसा गरे पनि उक्त चलचित्र हेर्ने दर्शकहरू सिनेमा हल पुगेनन् भने निर्माताहरू डुब्छन् । यतिबेला चलचित्र बुलबुलको अवस्था पनि त्यस्तै छ । चलचित्र प्रदर्शन त भैरहेको छ, तर विभिन्न कारणले सिनेमा हलमा दर्शकको संख्या न्यून छ अर्थात् विगत केही सातादेखि देखिएको दर्शकको खरेडी यो चलचित्रले समेत बेहोरेको छ । विनोद पौडेलद्वारा निर्देशित यो चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, मुकुन भुसाल, जोयश पाण्डे, लक्ष्मी वर्देवा आदि कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
चलचित्रका बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विविध प्रकारका समीक्षाहरू प्रकाशित भएका छन् । अधिकांश समिक्षकले उत्कृष्ट बताएको यो चलचित्रलाई केही समिक्षकले आलोचनासमेत गरेका छन् । भूमिका र अभिनयका दृष्टिकोणले यो चलचित्रलाई अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको करियरकै उत्कृष्ट चलचित्र भनिएको छ । यद्यपि चलचित्रको क्लाइमेक्सप्रति दर्शकसंगै समिक्षकहरू पनि असन्तुष्ठ छन् । कतिपयले चलचित्रलाई स्लो भनेका छन् भने कतिपयले यसअघिको चलचित्र ‘साँघुरो’ को धङधङीसमेत मानेका छन् ।
प्रायः नेपाली चलचित्र भाषाले मात्र नेपाली हुन्छन्, कथा, पात्र एवं प्रस्तुतिमा स्थानीयपन हुँदैन । कथ्य संरचनालाई उपेक्षा गरिन्छ भने बजारु सूत्र पछ्याइन्छ, तर कतिपय सिनेकर्मी यस्तो ‘भाइरस’ बाट मुक्त हुन खोज्छन्, सिर्जनशीलतामा विश्वास राख्छन् । यही सोच र साहसको परिणाम हो, बुलबुल । फिल्ममेकिङको औपचारिक अध्ययन गरेका पौडेलले कथित मूलधारका सिनेमामा नअटाउने पात्र र तिनका व्यथालाई बुलबुलको केन्द्रमा राखेका छन् । कथा पस्कने शैली पनि कलात्मक छ । यतिविघ्न आफ्नोपनको आभास गराउने चलचित्र हामीकहाँ बिरलै बन्छन् । बासी मसलेदार चलचित्रबाट दिक्दार दर्शकलाई बुलबुलले राहत दिनेछ । रैथाने स्वाद रुचाउनेहरूले त छुटाउने कुरै भएन । यसले मौलिक दृश्य–भाषा निर्माणमा एउटा दरिलो इँटा थप्नेमा सन्देह छैन ।
बलिउडले बासी बनाइसकेको फर्मुलामै चलचित्र बन्ने आरोप खेप्दै आएका नेपाली फिल्मकर्मीले पछिल्लो समय आफ्नै कथा, परिवेश एवं पात्रलाई टिपेर चलचित्र बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हो । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘बुलबुल’ पनि यही प्रयासको सिलसिला हो । व्यावसायिक धारका चलचित्रबाट अलग रहेर बनेका यसअघिका धेरै चलचित्रको समस्याजस्तै ‘बुलबुल’ मा पनि कथाको बहाव ढिलो र द्वन्द्वको ग्राफले उत्कर्ष लिन सकेको छैन । चलचित्र पात्र, चरित्र र संवाद लवजकै भुमरीमा बढी रुमल्लिएको छ । यसअघि पनि ‘साँघुरो’ जस्तो वैकल्पिक धारको चलचित्रको पटकथा लेखेर प्रशंसा बटुलेका विनोद पौडेल यसपटक ‘बुलबुल’ बाट निर्देशनमा पनि होमिएका हुन् । आफ्नै कथालाई पटकथामा ढालेकाले उनको चलचित्र चेतबारे जानकारका लागि यो चलचित्र अपेक्षित पनि हो । पात्र निर्माण, तिनको संवाद, लवज र लवाइखवाइमा पौडेल जति प्रस्ट छन्, उति नै विषयप्रवेशमा ढिलो, कथा बहावमा सुस्त र कथा बैठानमा चुस्त बन्न सकेका छैनन् । छायांकन, सेटअप चलचित्रको मुडअनुसार अब्बल छन् । पृष्ठभूमि संगीत मध्यम छ । यसले पनि चलचित्रको साख जोगाउन मद्दत गरेको छ । त्यसबाहेक निर्देशकले चलचित्रमा बिम्बको मीठो प्रयोग गरेका छन् । ‘बुलबुल’ को सरप्राइज प्याकेज चोपेन्द्रको चरित्र निर्वाह गरेका मुकुन हुन् । रणकलाको भूमिकामा स्वस्तिमा र पतिको प्रताडना सहेर पनि जीवन चलाइरहेकी भीमाको भूमिकामा लक्ष्मीको अभिनय सहज छ तर पटकथा भने सहायक पात्र र तिनका उपकथालाई मूल कथा र मूल पात्रसंग एकाकार गराउनबाट चुकेको छ । वैकल्पिक धारमा रहेर आफ्नै समाजका भुइँपात्र र तिनका सामान्य लाग्ने असामान्य कथालाई उनेर चलचित्र बनाउनु ‘बुलबुल’ को असल प्रयास हो । यो चलचित्रले दर्शकलाई जैविक खुराक चखाउन त खोज्यो तर त्यसको पक्वानमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेन ।
बिहेको भिडियो र अहिले फटाफट बनिरहेका नेपाली चलचित्रबीच के भिन्नता छ ? जवाफका लागि ‘फरक छुट्याऊ’ शैलीमा घोत्लिनुपर्छ । यसको प्रष्ट संकेत के भने, नेपाली सिनेमाबाट निर्देशकीय उपस्थिति हराउँदैछ । नतिजा, ६ दशक लामो फिल्मी अभ्यासपछि पछि पनि हामी ‘सिनेमा कस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने आधारभूत प्रश्नमा अल्झिएका छौं । यो प्रश्नको गाँठो केही हदसम्म फुकाउनेछ, चलचित्र ‘बुलबुल’ले । हरेक दृश्य, अझ भनौं हरेक शटमा निर्देशकको रचना–शिल्प कसरी पोतिन्छ ? घतलाग्दो जवाफ छ, बुलबुलसँग । विनोद पौडेलद्वारा निर्देशित यो चलचित्रमा कथाको दस्तावेज छैन, उपदेश छैन, आर्दश छैन, सन्देश छैन, तर्क छैन । अव्यक्त कथा छ, अदृश्य पीडा छ र त्यसलाई पोख्ने रहरलाग्दो ‘सिनेम्याटिक’ भाषा छ । चलचित्रमा मसला खोज्नेहरूले यो चलचित्र नरुचाउन सक्छन् । यसको क्लाइमेक्सले पनि फर्मुला चलचित्रका दर्शकलाई चित्त नबुझाउन सक्छ । यो चलचित्र कमेडी होइन, लभस्टोरी होइन, एक्सन होइन । बुलबुलमा हल्काफुल्का मनोरञ्जनको डोज खोजेर पाइँदैन । किनभने निर्देशकले बजार लक्षित चलचित्र बनाएका होइनन्, यसमा आफ्नो शिल्प खिपेका हुन् । हाम्रो जस्तो संवेदनशील चलचित्र बजारमा यो एउटा जोखिम हो ।
स्वस्तिमा खड्काले हालसम्म गरेको काममा बुलबुल उत्कृष्ट छ । उनले टेम्पो चालक बन्न सडकमा र आफ्नो व्यक्तित्वमा गरेको प्रयास स्पष्ट देखिन्छ, तर डायलग डेलिभरिमा भने उनी पुरानै चलचित्रहरूमा जस्तै लाग्छिन् । लक्ष्मी वर्देवा र जोयश पाण्डेको कथा र अभिनयले फिल्मलाई आधासम्म रणकला केन्द्रित हुन दिएको छैन । उनीहरूको कथा थोरै पनि बनावटी लाग्दैन । दुबै नाटकीय प्रस्तुत हुँदैनन् ।
यो चलचित्र प्रदर्शनमा आएको पाँच दिन (मंगलबारसम्म) भैसकेको छ । निर्माताले चलचित्रको कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छैनन् । किन गरेनन् ? त्यो उनले नै जान्दछन्, तर एउटा सत्य चाहिँ के हो भने चलचित्रको कलेक्सन सुनाउन लायक छैन । मल्टिप्लेक्समा विदेशी दुई चलचित्र ‘गल्ली ब्वाई’ र ‘एलिटा’ को चेपुवामा परेको छ । यो चलचिक्र सिंगल ‘स्त्रिन’ मा दर्शक उपस्थित औसत छ ।
अर्ग्यानिक तरकारीमा पनि कहिलेकाहीँ किरा लाग्न सक्छ, विभिन्न रोग हुन सक्छ । त्यसलाई अर्ग्यानिक भन्दैमा राम्रो र उत्तम मान्न सकिँदैन । त्यस्तै चलचित्र बुलबुललाई पनि ठिकै भन्दा माथि उठेर राम्रो चलचित्र भन्न सक्ने आधार छैन । गरिबीमा पेलिएको परिवारको दैनिकी गुजार्न र आफ्ना समस्याहरू पूर्ति गर्न काठमाडौंमा टेम्पो चलाउने महिला चालकहरू धेरै छन् । चलचित्रको विषयवस्तुले दर्शकलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन तथापि चलचित्रका पात्रहरूको काम भने प्रशंशा योग्य नै छ ।
प्रकाशित :फाल्गुन ११, २०७५
मदन पुरस्कारका लागि पुस्तक सूची सार्वजनिक पछिका टिप्पणी
कलात्मक चलचित्र बनाएर सडकमा आउन चाहन्नँ
सानो मन लाई मिश्रित प्रतिक्रिया श्रावण ३, २०७६
आजबाट हरर चलचित्र घर प्रदर्शन श्रावण ३, २०७६
सानो मन आजबाट प्रदर्शनमा असार २७, २०७६
रुढिवादी समाजको गतिलो चित्रण दयारानी असार २०, २०७६
चलचित्र कीर्तिपुर हलमा असार १३, २०७६
दयाहाङ राई स्टार आप्पा प्रदर्शनमा असार १३, २०७६
चलेन प्रेम दिवस असार ६, २०७६
अर्जुनको संगीतमा सन्नी लियोनीको आइडम डान्स जेष्ठ ३१, २०७६
चलचित्र हलमा झट्का जेष्ठ ३१, २०७६
प्रियंका र आयुषमानको प्रेम दिवस जेष्ठ ३१, २०७६